Tsika Makosi - Bilingual Dzidzo Institute
F1 Vadzidzi Zviwanikwa
Zvakasimba Chirungu Chirongwa
Mazuva ese Chirungu
Chirungu kune Zvakanakisa Zvinangwa
musha Chirongwa Zvirongwa ZvakakoshaTsika Makosi
Dzidzo tsika ndidzo zvidzidzo zvakagadzirirwa iwe uye nemutauro wako zvaunoda. Pamwe une hurukuro hombe iri kuuya kana iwe uchinetseka nekunzwisisa madimikira eAmerica. Tarisa pane chaiwo hunyanzvi hwemitauro - Kutaura, Kunyora, Chirevo, Grammar uye nezvimwe! Kutaurirana nekambani yedu yeCurriculum kunowanikwa kuti ubatsire kuona masimba ako nenzvimbo dzekuvandudza pairi.
Yakasarudzika Makirasi zvidzidzo zvega zvega nemudzidzi mumwe uye mudzidzisi mumwe.
Semi-Poga murayiridzo yakagadzirirwa kuringana nezvinodiwa nevadzidzi vaviri.
Mini-group zvidzidzo zvakagadzirirwa kuti zvienderane nezvinodiwa nevadzidzi vatatu - mashanu.
Chikamu chekudzidza chakasarudzika kusanganisira pre-kosi ongororo, kufambisa kubvunzurudza, zvakadzama curricular kurudziro, uye yega kuongorora
Zvidzidzo zvakagadziriswa zvinokupa kwakasimba kudzidzira mumitauro yemitauro yakakosha kwazvo kwauri, semuenzaniso: kutaurirana kwebhizinesi, nzwisiso yekuteerera, kugadzirira TOEFL, kunyora, kana kuwonekera kwechiRungu izwi, girama, uye kududzira.
Vane ruzivo, vakazvipira uye vane hushamwari vadzidzisi
Inokodzera Mazinga ese
20 Maawa Ose Chokwadi
Nzvimbo yesarudzo yako
Kunyoresa kune Kosi Yetsika Nhasi!
Chero chipi zvacho chaunoda - BEI inogona kubatsira! Zvidzidzo zvakagadzirirwa munhu kuti zvikwane kugona kwemitauro yemudzidzi.
Bilingual Dzidzo Institute
Kubvumidzwa & Hungu
Nhau & Dzokorora
Kuchenesa & Refund Policy
© Copyright 2021 Bilingual Dzidzo Institute